आफ्नै छायाँबाट तर्सन्छन् ओली-प्रचण्ड - नेपालबहस
गृहपृष्ठ खोज/विशेष आफ्नै छायाँबाट तर्सन्छन् ओली-प्रचण्ड
३० भदौ, काठमाडौं । देशमा अहिले उच्चकोटीको राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । अर्थात, हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं । संसारमा यसैलाई पछिल्लो लोकप्रिय राजनीतिक प्रणालीका रुपमा स्वीकारिएको छ ।
यही प्रणाली अन्तर्गत नेपालमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले शासनसत्ता चलाइरहेको छ । त्यसको मूल जिम्मेवारीमा नेकपा अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली छन् । उनी देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री पदमा आसिन छन् । उनलाई सघाउने काम अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गर्दैछन् । एक किसिमले भन्ने हो भने ओली प्रचण्ड नै अहिले नेपाल र नेपालीका भाग्यविधाता बनेका छन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध जागरुक हुन उनले सुझाएका छन् । यो लोकतन्त्र भनेको उनी र उनका अरिंगालको समर्थन गर्नेका लागि मात्र हो ? ओली र उनका मतियारले गरेका गलत कामको विरोध गर्ने जति सबै गणतन्त्र विरोधी भएको बुझाई छ । जबकी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै खतरा छ भने त्यो ओली–प्रचण्ड र उनका अरिंगालबाट मात्रै छ ।
तर, उनीहरु आफ्नो दायित्व निर्वाहमा कत्तिको सफल छन् त भन्ने प्रश्न चाहिं गर्ने बेला आएको छ । यस्तो प्रश्न गर्ने हो भने निराशा मात्रै फेला पर्छ । नेपाल र नेपाली जनताको सर्वाेत्तम हित गर्ने दायित्व पाएका दुबै नेता सबैभन्दा असफल र गैर जिम्मेवार छन् । जनताको आशा र भरोसालाई यिनीहरुले व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थको भकारी बनाएका छन् । दुई तिहाई समर्थनका साथ सरकारमा आएको झण्डै दुई वर्षको अवधिमा जनताको मन जित्ने एउटै काम गर्न सकेनन् । त्यसको दोष अरुका थाप्लोका हाल्न भने अहिले तम्सिएका छन् ।
‘नाँच्न जान्दैन आँगन टेढो’ भने जस्तो ओली–प्रचण्डको जोडी अहिले पुनर्उत्थानवादीले काम गर्न नदिएको रोइलो गर्दैछन् । आज नै नेकपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्ड भन्दै थिए :– परिवर्तन विरोधीका विरुद्ध अरिंगाल जस्तो जाइ लागौं । युवा नेता कार्यकर्तालाई उनी उक्साउने शैलीमा भन्दै थिए :– परिवर्तनका विरुद्ध षडयन्त्र हुँदै छ, प्रतिकारमा युवा जमात उत्रनु प¥यो । तर कस्तो षडयन्त्र कस्ले गरिरहेको छ भनेर चाहिँ उनले केही बताएका छैनन् ।
हिजो बैलगाढा चढेर गणतन्त्र आउँदैन भन्ने ओली आज महान गणतन्त्रवादी भएका छन् । त्यस्तै हिजो चाकरसँग हैन सोझै मालिकसँग मात्र वार्ता गर्छु भन्ने प्रचण्ड पनि आज सच्चा लोकन्त्रवादी बनेका छन् । ओली–प्रचण्ड आफैं लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर होइनन् । यिनीहरु त जनताले बलिदान दिएर प्राप्त लोकतन्त्रको दोहन गर्ने पात्र मात्र हुन् । एकपटक जनता झुक्किए, त्यसको मतलव सधैं यिनीहरुकै अनकण्टक शासन रहन्छ भन्ने होइन । त्यसैले आउने निर्वाचनमा जनताबाट धोवी चुटाई पाइने त्रासले अहिलेदेखि नै यस्तो रोइलो सुरु भएको छ ।
आफ्नै छायाँबाट ओली–प्रचण्ड तर्सिरहेका छन् । किनभने जनता समक्ष गरेका वाचा पूरा गरेका छैनन् यिनीहरुले । यो विषय उठाउने वित्तिकै ओली प्रचण्डको सात्तोपुत्लो जान थाल्छ । अनि जनताको ध्यान अयन्त्रै तान्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा बढेको रोइलो गर्ने गर्छन् । यदि त्यस्तो खतरा कोही कतैबाट भए दुई तिहाई समर्थन प्राप्त सरकार किन कारबाही गदैन त ? बेला बेला ओली प्रचण्डलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भूत चढ्ने गरेको छ ।
हिजो बयलगाढा चढेर गणतन्त्र आउँदैन भन्ने ओली आज महान गणतन्त्रवादी भएका छन् । त्यस्तै हिजो चाकरसँग हैन सोझै मालिकसँग मात्र वार्ता गर्छु भन्ने प्रचण्ड पनि आज सच्चा लोकन्त्रवादी बनेका छन् । ओली–प्रचण्ड आफैं लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर होइनन् । यिनीहरु त जनताले बलिदान दिएर प्राप्त लोकतन्त्रको दोहन गर्ने पात्र मात्र हुन् । एकपटक जनता झुक्किए, त्यसको मतलव सधैं यिनीहरुकै अनकण्टक शासन रहन्छ भन्ने होइन । त्यसैले आउने निर्वाचनमा जनताबाट धोवी चुटाई पाइने त्रासले अहिलेदेखि नै यस्तो रोइलो सुरु भएको छ ।
ओली–प्रचण्डको कार्यशैलीको विरोध गर्नु भनेको राजावादी भएको झ्याली पिट्ने काम भइरहेको छ । यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको आकर्षण खस्कने निश्चित छ ।
अघिल्लो लेखनेपाली संगीतका मुर्धन्य व्यक्तित्वको सम्मानार्थ सांगितीक कार्यक्रम !
अर्को लेखअटीजम केयर नेपाललाई मुक्तिनाथ विकास बैंकले दियो एक लाख सहयोग
नयाँ नक्शा जारी गर्ने प्रस्ताव मेरो हो : गौतम
लिपुलेक प्रकरणमा चीन पनि दोषी : प्रचण्ड
ओली र प्रचण्डद्धारा भारतलाई संयुक्त चेतावनी, सीमा नमिच्न आग्रह
एक-दुई दिनमै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउँछौँ : अध्यक्ष दाहाल
नेकपा सचिवालय बैठक : बामदेव प्रतिनिधिसभामा जाने, ओलीद्वारा आत्मालोचना
अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसमा अध्यक्ष प्रचण्डको शुभकामना